» Mungaab oo Askar xukumay, digniin xooganna udiray Saraakiisha ciidamada iyo Wariyaasha Soomaalilyeed
Mungaab oo Askar xukumay, digniin xooganna udiray Saraakiisha ciidamada iyo Wariyaasha Soomaalilyeed
February 22, 2013 - Written by maamule - Edited bymaamule ShareMaxkamada uu madaxda ka yahay Gen Mungaab ayaa maanta xukun ku riday labo askari oo katirsanaa ciidamada dowlada Soomaaliya iyo Ahlu Sunna Waljamaaca.
Maxkamada ayaa dil toogasho ah ku xakuntay Dable X.D.S C/laahi Cabdi Max’ed oo ku dhashay gobolka Banaadir kana tirsan ururka 4-aad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya markii maxkamada la horkeenay cadeymo iyo marqaatiyo, waxaana uu dilay marxuum Faarax Cabdi Cumar oo uu toogtay 29/11/2012.
Sidoo kale Maxkamada ayaa labo sano oo ciqaab ciidan ah ku xakuntay Dable X.D.S C/laahi Tifow ku dashay Muqdisho kana tirsanaa ururka ahlu sunna kaasoo si bareer ah u dilay dhibanae marxuum C/kaamil Max’uud, hase ahaatee waxaa sida shareecada islaanmka ay qabto ku heshiiyay in la iska cafiyo ninkaas labada qoys ee wax laga dilay iyo kan wax dilay, waxaana labo sano kadib laga sii deyn doonaa xabsiga.
Dhanka kale Gudoomiyah Maxkamada ciidamada qalabka sida ee dowlada Soomaaliya Xasan Max’ed Xuseen Muun-gaab ayaa digniin xoogan ujeediyay Saraakiisha ciidamada Soomaaliya iyo Wariyaasha ka howlgala gudaha dalka.
Waxaa uu shegay in Wariyaasha ay la kulmi doonaan xukun adag hadii ay ka fiirsan waayaan marka ay kahadlayaan Garsoorka gudaha dalka.
Mungaab ayaa sheegay in been abuur badan laga gudbiyay garsoorka dalka ayna gacan bir ah ku qaban doonaan Wariyaashaas iyo xarumaha ay ka shaqeyaan.
Dhanka kale Mungaab ayaa udigay Taliyaasha ciidamada in ay xabsiyada kasii daayaan dad dambiilayaal ah hadii lagu arkana talaabo adag oo dhanka sharciga ah lagu qaadi doono.
Hanjbaada Mungaab ayaa kusoo aadaysa xili Khkamiistii shalay ay maxkamada ciidamada qalabka sida toogasho ku fulisay sedex askari oo katirsanaa ciidamada dowlada Soomaaliya.
2 Responses to Mungaab oo Askar xukumay, digniin xooganna udiray Saraakiisha ciidamada iyo Wariyaasha Soomaalilyeed
Shanshi yare says:	February 22, 2013 at 17:27	Mungaab aad ayaa u mahadsan ayahy askarta umada leyneyso waxaabo kadan afku dhiiglayaasha ee isku sheegay wariyaal mudane labaadada uku koobad wariyayasha
Reply	Run sheg says:	February 22, 2013 at 17:46	Ani talo waxan dhihi laha mesha cidamo ma jogan e wa maleshiyadki hogami koxedyada somalia e dhaqan celin halo sameyo iyo siminaro ciyalka wa ciyal 20 kan sano sharci an arkin ama ku dhashay